တကူ သားလေး ရဲ့ နည်းပညာ စုစည်းမှု: Myanmar Unicode - Myanmar3Font and Keyboard
အရင်က Myanmar Unicode - Myanmar 1, Myanmar2နဲ့ Myanmar3တွေကို အစိုးရဌာနတွေမှာသာ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်.. Google ဥက္ကဋ္ဌ မြန်မာနိုင်ငံကို လာပြီးတဲ့နောက် Google က မြန်မာ Unicode ကို အသုံးပြုလာခဲ့ပါတယ်. အစိုးရဌာနတွေရဲ့ Web Page တွေအားလုံးမှာလည်း Myanmar3Unicode ကိုပဲသုံးပါတယ်.. နောက် အစိုးရဌာနတွေရဲ့ ရုံးသုံးစာတွေအားလုံးကို Myanmar3ပဲ အသုံးပြုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် DTP သမားတွေ၊ စာစီစာရိုက်လုပ်ငန်းနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်နေသူတွေ၊ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေ ဟာ Myanmar3ကို သုံးလာရပါပြီ.. ဒါကြောင့် Myanmar3Font နဲ့ Keyboard မရှိသေးသူများအတွက် သီးသန့်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ဒီထဲမှာတော့ Font နဲ့ ကီးဘုတ်. .Net Frame လောက်ပဲထည့်ပေးထားတာပါ.. Myanmar3ခွေမှာပါတဲ့ဖိုင်အားလုံးကို ထည့်မထားပါဘူး.. အဲဒါအားလုံးဆို MB 300 ကျော်နေတာရယ်. သိပ်လည်း အသုံးမတည့်တာရယ်ကြောင့် ဖြုတ်ထားခဲ့ပါတယ်.. ကျွန်တော်တင်ပေးတာလောက်နဲ့ဆို အဆင်ပြေပါပြီ..
Nyan Wai January 1, 2015 at 6:54 PM
တော်ဝင်မင်းသားလေး April 3, 2015 at 1:56 AM
dark cloud February 22, 2016 at 12:52 AM
Is this Zawgyi or unicode font?
kyaw win December 4, 2016 at 5:42 AM
Ko Thein Zaw March 8, 2017 at 8:33 PM
Ko Zaw October 6, 2015 at 9:11 PM
can I use it on window 8.1 64 bit version
boy phyu January 29, 2016 at 8:23 PM
Window 10 နဲ့ ကော အဆင်ပြေမလားခင်ဗျ အရင် Win Myanmar Unicode ကတော့ သိပ်အဆင်မပြေဘူးဗျ keyboard နဲ့ Type လုပ်တဲ့ စာတွေ တလွဲဆီ ထွက်လာတယ်ဗျ တော်တော် အခက်အခဲဖြစ်သွားတယ်ဗျ
windows 10အတှကျ mm3 က
ခှနျ နိုငျကို February 20, 2016 at 8:15 AM
Zawgyi သှငျးထားတဲ့စကျကို ဇျောဂြီပွနျဖွုတျပွီး ယူနီပွနျထညျ့ခငျြလို့ပါ။
Unknown March 4, 2016 at 4:55 AM
myanmar2ကို window764 bit မှာ Install လုပ်တာ မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်
စိုး ထက် May 24, 2016 at 9:02 PM
myanmar unicode သွင်းတာကျတော့ သွင်းတာရပီး restart လုပ်လိုက်ရင် မရတော့ဘူး အင်္ဂလိပ်စာပဲထွက်လာတယ် ကူညီပါဦး
ngway aung June 14, 2016 at 7:03 PM
အကိုရေ huawei Y310 t10 imeiပျောက်သွားလို့ပြန်ရှာနည်းလေးပြောပြပာလား
sengdu ' October 3, 2016 at 9:58 PM
myanmar3 unicode font မှာ ငသတ်အောက်မြစ် ရိုက်လိုက်ရင် မလှဘူး တစ်လုံးစီကွဲသွားတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ
cho mar lwin January 20, 2017 at 9:25 PM
myanmar3 font မှာ “ှ” ရှာလို့မရဘူး၊ “ ဦး ” ကိုလည်းရေးမရဘူးဖြစ်နေတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ပြောပြပေးပါရှင့်။
aung myint oo May 3, 2017 at 10:51 PM
Shift M ကိုရိုက်​ပါ